လူငယ်​​တွေကြားမှာ နာမည်​ကြီး​နေတဲ့ ချမ်း​မြေ့​မောင်​ချိုပါဝင်​သီဆိုထားတဲ့ Y3llo ရဲ့ သီချင်းအသစ်​ – ရွှေပြည်သစ် မီဒီယာ
လူငယ်​​တွေကြားမှာ နာမည်​ကြီး​နေတဲ့ ချမ်း​မြေ့​မောင်​ချိုပါဝင်​သီဆိုထားတဲ့ Y3llo ရဲ့ သီချင်းအသစ်​
လူငယ်​​တွေကြားမှာ ​ရေပန်းစား​နေတဲ့ Y3llo၊ PAST12၊Daniel Sawတို့နဲ့ Myanmar Idol Season3ပြိုင်​ပွဲဝင်​တစ်​ဦးဖြစ်​တဲ့ ချမ်း​မြေ့​မောင်​ချိုတို့အတူ ပူး​ပေါင်းဖန်​တီး​ထားတဲ့ “We Are One” ဆိုတဲ့သီချင်း​လေးက လူငယ်​ပရိသတ်​​တွေရဲ့ ကြားမှာ နာမည်​ကြီး​နေတာပါ။ မြူးကြွတဲ့ သံစဉ်​​လေး​တွေနဲ့အတူ အမိုက်​စားစာသား​တွေနဲ့ ပရိသတ်​​တွေရဲ့စိတ်​ကို ဆွဲ​ခေါ်သွားနိုင်​တဲ့ သီချင်း​လေးမို့ ထပ်​ခါထပ်​ခါ နား​ထောင်​မိသွားကြမှာ မလွဲပါပဲ​နော်​။
ချစ်​ပရိသတ်​​တွေအတွက်​ လူငယ်​​တွေကြားမှာ နာမည်​ကြီး​နေတဲ့ ချမ်း​မြေ့​မောင်​ချိုပါဝင်​သီဆိုထားတဲ့ Y3llo ရဲ့ သီချင်းအသစ်​ကို ​​ဝေမျှ​ပေးလိုက်​ပါတယ်​​နော်​။
Y3llo က​တော့ “PAST12x Y3llO x Chan Myae Mg Cho x Daniel Saw – We Are One (Myanmar Premium Countdown Official Anthem 2018)Enjoy our anthem and get ready to party with world’s best DJs, amazing firework shows and many more fun activities! ” ဆိုပြီး သူတို့ရဲ့သီချင်း​လေးကို လူမှုကွန်​ယက်​​ပေါ်မှာ ​ဝေမျှ​ပေးထားတာပါ။
ချမ်း​မြေ့​မောင်​ချို​လေးကလည်း အဆိုပါသီချင်းဗီဒီယို​လေးမှာ သူမရဲ့ အသံချိုချို​လေးရယ်​နဲ့အတူ ပါးပါး​လေး သရုပ်​​ဆောင်​ထားပါ​သေးတယ်​။
Y3llo၊ PAST12၊ Daniel Sawတို့နဲ့ ချမ်း​မြေ့​မောင်​ချို​လေးတို့ရဲ့ သီချင်းဗီဒီယို
ဒီ​နေ့​ခေတ်​ လူငယ်​​တွေရဲ့ ​ပျော်​ရွှင်​မှုဆိုတာ​တွေထဲမှာ EDM ပွဲ​တွေကလည်း မပါမဖြစ်​ပဲမို့ Dj ​တွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကလည်း အ​ရေးကြီးလာပါပြီ။ ချမ်း​မြေ့​မောင်​ချို​လေးက​တော့ လတ်​တ​လောမှာ အနုပညာလှုပ်​ရှားမှု​တွေ ဆက်​တိုက်​ ပြုလုပ်​ဖြစ်​​နေတာပါ။ မိုမို​လေးချစ်​ပရိသတ်​​တွေလည်း Y3llo၊ PAST12၊ Daniel Sawတို့နဲ့ ချမ်း​မြေ့​မောင်​ချိုတို့ရဲ့သီချင်း​လေးကို သ​ဘောကျရင်​ share သွားကြဖို့ မ​မေ့ပါနဲ့​နော်​။
Shwe FM ပွဲကို အလန်းစားဖက်ရှင်နဲ့ ပွဲတက်ခဲ့တဲ့ ဝါဆိုမိုးဦ
(၁၀) နှစ်ကျော်အမြတ်တနိုးထားခဲ့ရတဲ့ ဆံပင်ရှည်ကြီးကို ဖြတ်ပြီး ကတုံးတုံးလိုက်ခဲ့တဲ့ ဦးကျော်သူ.
အသက် (၈) နှစ်အရွယ်မိန်းကလေး မုဒိမ်းပြုကျင့်သူ တရားခံအား သတင်းပေးရန် ရဲတပ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်
အရမ်းကြိုက်ခဲ့တဲ့ မင်းသား ဒေါင်းအပေါ် နေခြည်ဦးရဲ့ ရင်ဖွင့်စကား